Itoobiya oo ku bilaawday biya buuxinta 2aad ee Waaskooyinka Al Nahda.
Wednesday July 07, 2021 - 09:38:33 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Itoobiya ayaa bilaawday wajiga labaad ee buuxinta harada biyo xireenka Al Nahdah oo ay ka dhisayso webiga Niilka buluugga taas oo sii hurineysa xiisadaha hadda taagan ka hor kulan ka dhici doono xarunta Golaha Amniga.
Kulanka UN-ka waxaa looga doodi doonaa arrimo ku saabsan Saddu nahdah, Itoobiya ayaa si aad ah udiidan in lacaalamiyeeyo qadiyadda biya xireenkan halka dowladaha kasoo horjeedo ay aad ugu sacaba tumayaan in maxaafisha dowlliga ah lageeyo murunka ka aloosan Niil.
Wasaaradda Waraabka iyo Biyaha Masar ayaa bayaan ay soo saartay maalinkii Isniinta ku sheegtay in tallaabadani ay xadgudub ku tahay wax ay ugu yeertay sharciyada caalamiga iyo qawaaniinta lagu maamulo mashaariicda laga dhisayo webiyada.
Itoobiya waxay si rasmi ah ugu wargalisay Wasiirka Waraabka Masar, Mohamed Abdul caadil in ay bilowday wajiga labaad ee buuxinta kaydka biyo xidheenka kaas oo qaada 74 Milyan Mitir Kiyuubig biyo ah.
Tan iyo sanadkii 2011, Masar, Suudaan iyo Itoobiya waxay ka wada xaajoonayeen heshiis ku saabsan buuxinta iyo ku shaqeynta biyo xireenka alnahdah oo Addis Ababa ay dhisayso si ay u noqoto isha ugu weyn ee laga dhaliyo korantada Afrika iyadoo la filayo in laga dhaliyo koronto gaaraysa 6,500 oo megawat.
Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa si aad ah udiiddan hanaanka ay Itoobiya wax uwaddo, Masar ayaa dhowr jeer ku hanjbatay in ay tallaab melleteri ka qaadi doonto Itoobiya haddii ay ka madax adeygto baaqyada caalamiga ah ee ka dalbanaya in jadwal loo sameeyo hanaanka biya buuxinta.
Sawirro+Codad: Dhismaha Dabaqa 2aad ee Masjidka Bu'aale oo bilaawday.